အင်တာနက်ဆိုင် ပိုင်ရှင်များ ~ (IT) ကိုထိုက်
စိတ်မပူနဲ့ဒီအတိုင်းဆို Cyber Cafe ကို Small Business လို မမြင်တဲ့ဆိုင်တွေ ပိတ်ပစ်ရတော့မယ်..အင်တာနက်ဆိုင်တွေ ကျဆုံးခန်းက လာတော့မယ်... ၁၅၀၀ ဖုန်းက အာဆီယံ နိုင်ငံတွေ ခေါ်လို့ ရနေပြီ.. နောက် ၉ လပိုင်းမှာ Operator အသစ်တွေ ရွေးပြီးရင် ပိုရူးမယ်..
ဈေးပေါပေါနဲ့ အင်တာနက်/ Over Sea တွေ ခေါ်လို့ ရမယ်.. ဒါဆို ဘာလုပ်မလဲ.. ဒါလေးတွေ အားပြုပြီး ရပ်တည်နေရတဲ့ အင်တာနက်ဆိုင်တွေ ဘာဆက်လုပ်မလဲ.. သူတို့ ကို မှီတွယ်ပြီး ရပ်တည်နေရတဲ့ Service Technician တွေ၊ ဆိုင်ဝန်ထမ်းလေးတွေ ငိုရပြီလေ... ပိုက်ဆံတွေ အများကြီး အကုန်ခံပြီးရင်းနှီးထားရတဲ့ Internet ဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေလဲ မျက်ရည် တောက်တောက်ကျရတော့မယ်... ဒီတော့ အပြောင်းအလဲလေးတွေ လုပ်ကြဖို့အချိန်တန်ပါပြီ.. ဥပမာ Downloader ပိတ်မဲ့အစား Download Quota ကို 100 MB လောက် သတ်မှတ်ပြီး ကျော်တာနဲ့Extra Charge ယူတာမျိုး.. Wi-fi Ticket တွေ ထုတ်ရောင်းပါ.. လက်တော့တွေနဲ့ လာသုံးဖို့ အဆင်ပြေအောင် နေရာပေးထားတာမျိုး.. ၁ နာရီ Ticket ၂ ခုဝယ်ရင် ကော်ဖီ တခွက်တိုက်တာမျိုးလုပ်ပေးရမယ်.. ဖတ်စရာ Ebooks လေးတွေ.. ကြည့်စရာ ရုပ်ရှင်ကားလေးတွေ အမြဲတမ်း Update လုပ်ပေးနေရမယ်.. TV Series တွေ အတွဲလိုက် ထည့်သင့်ရင် ထည့်ထားရမယ်.. နောက်ပြီး Event လေးတွေ Host ပေးနိုင်ရမယ်.. Dota ချိန်းပွဲခုတ်တာမျိုး.. Anime ကြည့်သူတွေ အချင်းချင်း Share ကြတာမျိုး ကိုယ့်ဆိုင်မှာ လုပ်နိုင်အောင် စီစဉ်ပေးထားရမယ်... ဟိုဟာပိတ် ဒီဟာပိတ်ထက် ဆားဗစ်သမား ကောင်းကောင်း ငှားပါ.. Internet Software လေးတွေ တင်ပြီး Cafe Software လေးတင် DeepFreeze အုပ်တဲ့ ဆားဗစ်သမားမျိုးမဟုတ်ဖူးနော်.. နောက် ဂိမ်းတွေ တင်ပါ. ဆိုင်ဆူတာတော့မှန်တယ်.. လူဆိုတာ လူလိုပြောရင် လူလိုသိကြပါတယ်.. မသိရင် ကန်သာထုတ်လိုက်.. ရတဲ့ ပိုက်ဆံနဲ့တခြား Customer တွေ သူ့အသံကြောင့် လစ်ပြေးတာနဲ့ မကာမိရင်ပေါ့.. ဘာပဲပြောပြော ဂိမ်းသမား ပိုက်ဆံ ဖြုန်းအားကို သိကြမှာပါ.. နောက်ပြီး Service ကောင်းတယ်ဆိုတာ Customer နဲ့ ဆက်ဆံရေး ပြေပြစ်တာမျိုးမဟုတ်ဖူး... အလွယ်မလိုက်ကြပါနဲ့ ..အင်တာနက်ဆိုင်တဆိုင်မှာ ရှိသင့်တာလေးတွေ အစုံရှိပြီး ကိုယ့်ဘက်က လုပ်နိုင်သမျှ အကုန်လုပ်ပေးထားတာမျိုးကိုပြောတာ.. ဒီအဆင်အတိုင်းဆက်သွားလို့ ကတော့ ရူးသွားမယ်.. ဆိုင်ဖြုတ်ဖို့စိတ်မကူးနဲ့ နော်.. အင်တာနက်ဆိုင် ၁၀ ဆိုင်မှာ ၈ ဆိုင်က ရောင်းချင်နေတာ.. ဆက်လုပ်ကြပါ.. ဒါ ဖွံဖြိုးဆဲနိုင်ငံပါ..
လူတိုင်း ဖုန်းတလုံးရှိချင်ရှိမယ်. ကွန်ပြူတာတလုံးတော့ လူတိုင်းမရှိဘူး.. Phone တလုံးနဲ့PC တလုံးနဲ့ လုပ်နိုင်တာခြင်း အကွာကြီးပါ.. Phone လေးနဲ့Facebook / Gtalk လောက်သုံးပြီး ကျေနပ်နေရင်တော့ သူ့ သမိုင်းပေါ့.. ကိုယ့်ဆိုင်က PC ကလဲ Facebook / Gtalk ထက် ပိုပြီး သုံးနိုင်အောင် လုပ်ထားသင့်တယ်ဆိုတာလဲ မေ့မထားပါနဲ့ .. အပြောင်းအလဲ လုပ်ဖို့အချိန် ၃ လ လောက်ပဲ ရတော့တယ်လို့ပြောရင်း :)
Sentinel Wai Yan ( Administrator at Unity Online Game )